ESI EDE IHE N'AHA OTU VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Otu esi edozi ihe ndekọ na nnọchite nke otu VKontakte
Nchebe bụ ihe dị ezigbo mkpa mgbe ị na-egwu n'Internet. Otú ọ dị, enwere ọnọdụ ebe njikọ njikọ dị mkpa ka enwere nkwarụ. Ka anyị chọpụta otu esi eme usoro a na nchọgharị Opera.
Gbanyụọ njikọ dị nchebe
N'ụzọ dị mwute, ọ bụghị saịtị niile na-arụ ọrụ na njikọ dị mma na-akwado ọrụ yiri nke ahụ na usoro iwu na-adịghị ize ndụ. N'okwu a, onye ọrụ enweghị ike ime ihe ọ bụla. Ọ ghaghị ikwenye na iji usoro nchebe edozi, ma ọ bụ jụ ịga na akụ ahụ kpamkpam.
Ọzọkwa, n'ime nchọpụta Opera ọhụrụ ahụ na Blink engine, a naghị enyekwa nkwụsị nke njikọ dị nchebe. Otú ọ dị, a pụrụ ime usoro a na ndị nchọgharị ochie (ruo na 12.18 gụnyere) na-aga n'ihu na Presto. Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ nọgidere na-eji ihe nchọgharị ndị a eme ihe, anyị ga-atụle otú e si gbanyụọ njikọ dị nchebe na ha.
Iji mezuo nke a, mepee menu nchọgharị site na ịpị ya na logo na akuku aka ekpe nke Opera. Na ndepụta nke mepee, gaa na "Ntọala" - "Ntọala Ntọala". Ma ọ bụ naanị pịa ụzọ mkpirisi keyboard Ctrl + F12.
Na windo ntọala nke mepee, gaa na "Di elu" taabụ.
Ọzọ, gaa na mpaghara "Nche".
Pịa bọtịnụ Nche "Nche".
Na windo nke meghere, kpochapụ ihe niile, wee pịa bọtịnụ "OK" ahụ.
Ya mere, njikọ dị nchebe na Opera nchọgharị na Presto engine nwere nkwarụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị n'ọnọdụ niile ọ ga-ekwe omume iwepu njikọ ejikọtara. Dịka ọmụmaatụ, na ihe nchọgharị Opera ugbu a na Blink n'elu ikpo okwu, nke a bụ ihe agaghị ekwe omume. N'otu oge ahụ, usoro a, na ụfọdụ mmachi na ọnọdụ (nkwado site na saịtị nke usoro nkịtị), nwere ike ịrụ na nsụgharị ochie nke Opera na Presto engine.